मल नहुँदा रोकिंदै रोपाइँ, बेर्ना सुक्ने चिन्ता
बेर्ना हुर्किएको भए पनि मलको अभावमा किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा किन्न पाइएको छैन भने भारतबाट ल्याउन नेपाली सुरक्षाकर्मीले नै नदिएको किसानको गुनासो छ।
मानव स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको रासायनिक विषादी न्यूनीकरण गर्न यसको विकल्प खोजीसँगै सचेतना विस्तार गर्नुपर्छ।
के कृषि उत्पादन एकै वर्षमा एक तिहाइले बढाउन सकिन्छ? आउने वर्ष अभूतपूर्व ढङ्गमा खाद्यान्न सहितका कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना अविश्वसनीय छ।
भू-उपयोग नियमावली जारी, खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख जरिवाना हुने सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको छ। यसमा खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
के कृषि क्षेत्रको बजेट ५० प्रतिशत बढेको हो? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा जाने रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको दाबी गरेका छन्।
बाँझो जमीन खेती गर्न भाडामा दिइने सरकारले बाँझो जमीन खेती गर्न भाडामा दिने भएको छ।
उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गरिने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
रासायनिक मल किन्न १५ अर्ब विनियोजन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहज आपूर्ति हुने गरी रासायनिक मल खरीद गर्ने जनाएको छ।
मकैमा हाल्ने वेला भइसक्यो मल छैन रासायनिक मल अभावमा लगाएको बाली हुर्काउनै मुश्किल परेका देशरभरका किसान नयाँ बाली लगाउन समेत उत्साही देखिंदैनन्। सरोकारवाला कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले वेलैमा आयात नगर्दा खेतीको मुख्य सिजनमै किसानले मल नपाएका हुन्।
हेटौंडाको पोल्ट्री फार्ममा देखियो बर्ड फ्लु मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-७ नागस्वतीस्थित पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लु देखिएको छ।
देश कृषिप्रधान तर ९ महीनामा ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा थप परनिर्भर हुँदै गएको देखिएको छ।
कृषि जीवनप्रसाद राई
चीनबाट आयो दुई दिनमा ४६४ मेट्रिक टन मल
चीनबाट तातोपानी भन्सार नाका भएर दुई दिनमा ४६४ मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएको छ।
पाँच लाख टन कम फल्यो धान, पाँच वर्षयताकै न्यून धान थन्क्याउने वेला आएको बेमौसमको पानी र हावाहुरीका कारण यो वर्ष धानको उत्पादन उल्लेख्य घटेको छ।
राजनीतिसँगै कृषिमा रमाउँदै नेता राजनीतिको आडमा आर्थिक लाभ लिइरहेको आरोप लागिरहेको वेला कैलालीका केही स्थानीय नेता भने राजनीतिसँगै कृषिमा रमाइरहेका छन्।